जब मन्त्रीहरू भ्र,ष्टाचारमा मुछिन्छन्, तब बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री ओली अघि सरिहाल्छन् !…हेर्नुहोस!
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले बालुवाटारमै बसेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । अ,स्पतालबाट फर्केपछि उनले एकपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखे । त्यसपछि उनी के गर्दैछन् ? कोरोनाबाट त्रस्त जनताका लागि कस्ता योजना बनाउँदैछन् ? भन्ने आमजनताले देख्न र सुन्न पाएका छैनन् ।
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्र,ष्टाचारीको त मुख पनि हेर्दिन भनेको विषय निकै चर्चामा थियो । उनले आफू पनि भ्र,ष्टाचार गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्न । कसैले गरेको छ भने मुखै नहेरी का,रबाही गर्छु भनेका थिए ।
ओलीले त्यसो भनेको केही समयपछि नेपालमा ठू,ल्ठूला भ्र,ष्टाचार का,ण्ड सार्वजनिक भए । ओली क्याबिनेटकै चर्चित मन्त्रीहरु भ्र,ष्टाचारमा मुछिए। वाइडबडी खरिद का,ण्ड होस् कि यती ग्रुपलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा सित्तैमा दिएको का,ण्ड होस् । मेलम्ची आयोजनाका ठे,केदारसँग मन्त्रीले २५ करोड घु,स मागेको का,ण्ड होस् वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको का,ण्ड होस् सबैमा प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रीहरु जोडिएका छन् ।
तर, जब आफ्ना मन्त्रीहरुको नाम आर्थिक अ,नियमिततामा मु,छिन्छ, तब प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं अघि सरिहाल्छन् बचाउ गर्छ । अहिले चीनबाट खरिद गरिएको कोरोना उ,पकरणमा समेत स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको नाम मुछिएको छ । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको विषयमा छ,लफल गर्न आवश्यक नै नरहेको बताएका छन् ।
हुन त यसअघि पनि उनले यसरी नै मन्त्रीहरुको बचाउ नगरेका होइनन् । त,त्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी वाइडबड्री खरिदमा चार अर्ब भ्र,ष्टाचार भएको भन्दै वि,वादमा परेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले छा,नबिन समिति बनाए । पछि अधिकारी नि,र्दोष भएकाले छा,नबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड क,मिसन मागेको आ,रोपमा वि,वादमा परे । आफूले रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, ओलीले सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भ्र,ष्टाचार नगरेको र यो विषय अ,नुसन्धान गर्नै नपर्ने भन्दै आफैं सफाइ दिए ।
अहिले उनी स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई काँध थापिरहेका छन् । जबकि चीनबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य साम्रगीमा करोडौं भ्र,ष्टाचार भएको पत्रपत्रिकामा समाचार आइसकेका छन् । सम्बन्धित विज्ञहरुले नै यसबारेमा तथ्यसहित आफ्ना भनाइ राखिसकेका छन् । कुन कुन सामान किन्दा कति कति भ्र,ष्टाचार भयो भनी तथ्यसहित आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल एक्सन लिनुपर्ने हो, तर उनी आफैं यस विषयमा छलफल नै गर्नु नपर्ने भन्दै बचाउ गर्न लाग्नुले उनको कथनी र करणीमा फरक देखिएको जनताले अनुभूति गर्न थालेका छन् ।